Huawei wuxuu sharad ku geli doonaa internetka waxyaabaha ku saabsan qalabkiisa | Androidsis
Huawei waxay sharad ku geli doontaa internetka waxyaabaha aaladaha ay ku shaqeyso
Alfonso ee Miraha | | Huawei, MWC, Noticias
Huawei qaar ka mid ah war aad u xiiso badan ayaa loo keenay daabacaaddan ugu dambeysay ee MWC. Waxaan ka hadlayaa tan cusub Huawei P10 iyo P10 Plus, marka lagu daro smartwatch-keeda, Huawei Watch 2.
Waxaan horeyba kuu siinay dareenkeena ugu horeeya kadib markaan tijaabinay dhamaan xalalka Huawei ee Mobile World Congress 2017, hada waxaan kuu keenaynaa wareysi kaas oo Juan Cabrera, Maamulaha Waxsoosaarka ee Huawei Spain, uu nooga waramayo dhamaan bilaabitaanadan iyo Ballanqaadka Huawei ee Internetka Waxyaabaha.
1 Huawei wuxuu sharad ku gali doonaa internetka waxyaabaha
2 Leica waxay sii joogi doontaa joogitaanka qalabka mustaqbalka ee shirkadda
3 Haysashada Huawei P10 ka hor Maarso 15 waxayna ku siin doonaan Huawei Watch 2
Huawei wuxuu sharad ku gali doonaa internetka waxyaabaha
Intii lagu gudajiray soo bandhigida Huawei dhexdeeda qaab dhismeedka carwada, waxaan filayay soo saaraha inuu ka hadlo xaqiiqada dalwaddii. Sanadkii la soo dhaafay waxay soo bandhigeen muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah, qalab aan ka tagin dhulka Aasiya oo aan ka ogaanno wax yar, sidaa darteed markaan aragno sida tikniyoolajiyaddu u socoto, suurtagalnimada in Huawei waxay ku sharraxday sannadkan muraayadaha VR in suuqa Yurub la gaaro ayaa macquul ahayd.
Ugu dambeyntiina sidaas ma aysan aheyn, laakiin Juan Cabrera ayaa dhowr arrimood innooga caddeeya: hal dhinac waxaan haynaa Huawei P10 Plus, taleefan leh shaashadda 2K sidaa darteed waa xalka aad u xiisaha badan in lagu raaxeysto waxyaabaha ku jira VR. Laakiin ujeedada Huawei waa inay diirada saarto internetka waxyaabaha.Qofkiinii aan garanayn waxa uu yahay, ayaa idiin sheegaya waxaas Waxay ka kooban tahay bixinta qalab kala duwan oo awood u leh inay macluumaad siiso dadka isticmaala.
Sidan markaan albaabka ka xirno gurigayaga waxaan awoodi doonnaa inaan ku helno ogeysiis ku saabsan smartwatch-keena, ama in rusheeyaha beerta ay shaqeynayaan markii xayawaan u dhow ama qof la ogaado oo aan meel fog ka howlgelin karno.
Mawduuca Internetka Waxyaabaha ayaa aniga iila muuqda mid aad ii xiiso badan iyo xaqiiqda ah in shirkadda Huawei ay ka shaqeyneyso hagaajinta qalabkeeda iyo, maxaa diidaya, inay soo saarto xalal u gaar ah sidii ay sameysay dhawaan Google leh Buulkaaga, waa war weyn.
Leica waxay sii joogi doontaa joogitaanka qalabka mustaqbalka ee shirkadda
Mawduuc kale oo aan ka soo hadalnay wuxuu ahaa isbahaysi ka dhexeeya Leica iyo Huaweaniga. Soo-saaraha Aasiya ayaa la yaabay intii lagu jiray furitaanka Huawei P9 isagoo muujinaya taleefan leh laba optics oo ay saxiixday Leica.
Tallaabadan Huawei wuxuu ka dhex muuqday Sony, bixiyaha ugu weyn ee kamaradaha loogu talagalay taleefannada casriga ah ee suuqa, si loogu sharaxo Leica. Dhaqdhaqaaq si fudud u noqon kara olole suuqgeyn ah oo lagu muujinayo taleefan ka duwan shirkadda. Laakiin markay arkeen taas Mate 9 iyo P10 iyo P10 Plus oo dhowaan la soo saaray ayaa wali leh kamaradaha Leica, waxaa iska cad in isbahaysigu uu aad u xoogan yahay.
Oo kani waa war kale oo weyn. Waa xaqiiqo in kamaradda Huawei P9 ayaa dejisay isbeddellada iyo soosaarayaal aad iyo aad u badan ayaa sharad ku samaynaya nidaamkan kamarad laba-geesood ah. Markay aragtay in Leica iyo Huawei labaduba ay sii wadi doonaan inay soo bandhigaan moodallo leh kamarad noocan ah, waxay u fureysaa noocyo kaladuwan oo mustaqbalka ah oo ka imanaya noocyo kale oo isticmaali kara muraayadaha isku midka ah. Waxaanna hore u aragnay in natiijooyinka la gaadhay ay runti wanaagsan yihiin.
Haysashada Huawei P10 ka hor Maarso 15 waxayna ku siin doonaan Huawei Watch 2
Ugu dambeyntii, waxaan haynaa dalab aan caadi aheyn oo soo saaraha ah: Haddii aad ballansatid Huawei P10 kahor Maarso 15, waxaad helaysaa Huawei Watch 2 hadiyad ahaan. Iyadoo la tixgelinayo in saacaddu ku kici doonto 329 yuuro, waa soo jeedin in lagu xisaabtamo taasna waxay leedahay ujeedo cad: in laga xado iibka LG iyo LG G6 iyada oo la sugayo imaatinka Samsung Galaxy S8.
Huawei waxay qabatay shaqadeedii MWC 2017 soo bandhigaya qalab taxane ah oo aad u xiiso badan oo shaki la’aan la tartami kara tartamayaashooda sidoo kalena, sidii caadada u ahayd soo saaraha, waxay bilaabayaan dalab aan laga adkaan karin si ay u sii wadaan una iibiyaan unugyo badan intii suurtagal ah.
Sanadkii la soo dhaafay kuma aysan dhiirran inay soo bandhigaan Huawei P9 munaasabad ay Samsung had iyo jeer ahayd halyeeyada ugu weyn. Laakiin sanadkan maqnaanshaha tartankiisa ugu weyn ayaa abuuray qaabka ugu habboon ee Huawei si ay u qabsato booska koowaad ee iibka adduunka ee Samsung. Horay ayey uga gaadhay Spain.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei waxay sharad ku geli doontaa internetka waxyaabaha aaladaha ay ku shaqeyso
Huawei Watch 2, waxaan kuugu sharxi doonaa 3 daqiiqo gudahood
Codsiyada ugufiican ee lagu cadaadiyo lana jajabiyo faylasha ku jira Android